AquaSlide | ရေဆလိုက်ထုတ်လုပ်သူ - play structure - aquaslide.fr
(+ 33) 960_351 830 (ဒေသခေါ်ဆိုခကုန်ကျစရိတ်)
စာအုပ်ငယ် ဆက်သွယ်ရန် ကိုးကား အထူးကမ်းလှမ်းမှု မျှဝေခြင်း သတင်းလွှာ
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်များ ဒီဇိုင်းရုံးဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်လာသည် ထိန်းချုပ်မှုခြေရာကောက် ပို့ခြင်း areaရိယာကိုနှိပ်ပါ စုဆောင်းမှု ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ကိုးကား ဆက်သွယ်ရန်
က de jeu
စိတ်ခံစားမှု - စွမ်းဆောင်ရည် - လုံခြုံမှု
သီးသန့်အလှအပဘယ်မှာဒီ ရေလျှော ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာတို့ဖြင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ ဤသည်စခန်းချသည့်အခါအလှဆုံးကျောက်မျက်သူ့ကိုယ်သူကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ဆေးလိပ် ရေနေ အဆိုပါအလွအစီအစဉ်၏အထင်ကရအကြား၎င်း၏နေရာတစ်ခုစေသည်။ AquaSlide စကွဝuniverseာကိုဆောငျရှကျပါနှငျ့အမြားဆုံးသနျ့ရှငျးသောကိရိယာမြားနှငျ့ပျြောရှငျသောဂိမ်းမြားကိုရှာဖှပါ။
- အကျယ်ဆုံးသောအကွာအဝေးကိုရှာဖွေပါ ဆေးလိပ် ရေနေ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ catalog တောင်းခံပါ။
ဤအတွက်အတိုင်းအတာများနှင့်တိုင်းတာမှုများ ဆေးလိပ် ရေဥယျာဉ် ရေတံခွန်။ ၎င်း၏ပရိုဖိုင်းနှင့်၎င်း၏ volumes ကိုကထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်ပေးပါ။ ညီမျှခြင်းမရှိဘဲ, ဒီ ဆေးလိပ် ရေဥယျာဉ် ၎င်း၏အချိန်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ခမ်းနားသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သေချာပေါက်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
- AquaSlide အကွာအဝေးနှင့်၎င်းကိုတောင်းပါ slides ရေဥယျာဉ် အချိန်နှင့်အတူ ergonomics အတွက် ...
တစ် ဦး တည်းနှင့် UNIQUE, ၏စပ် ရေကန်လျှော အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်းကိုrန္ဒြေစောင့်ခြင်း၏အခြေအနေတွင်ဗိသုကာကျွမ်းကျင်ပိုင်ရဲစိန်ခေါ်မှုများ။ မတူနိုင်တဲ့သဘာဝအလှတရား, ဒီ ဆေးလိပ် ရေကူးကန် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ကလေးများ၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများမှလွတ်မြောက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
- AquaSlide ၏လက်မှတ်နှင့်ကမ္ဘာကျော်ထုတ်လုပ်သူထံမှအရည်အသွေးရေကန်ဆလိုက်ပုံဖော်ပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားမှု, ရေဂိမ်း လှပသောဝန်းကျင်တွင်စိုက်ထားသောမြီးကောင်ပေါက်များကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအဖြစ်သို့တွန်းပို့သည်။ ၎င်း၏ဗိသုကာအားဖြင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းအောင်, ဒီဂုဏ်သတင်းရေဂိမ်းတစ်ခုအာရုံခံစားမှုစေနှင့်လျင်မြန်စွာကလေးများအတွက် Multi- ဂိမ်း၏ပြဇာတ်ရုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရေဆလိုက်, weir နှင့်ထပ်တူထပ်မျှယန္တရား၏ပေါင်းစပ်။ လုံခြုံသောနေရာရှိလှန်လှောတစ်ခု၊ သူတို့၏သာလွန်ထူးကဲမှုကိုသက်သေပြခြင်း၊ သူတို့၏မှော်အယူအဆများနှင့်လှည့်စားမှုများ။
- သင့်ဘရိုရှာကိုတောင်းဆိုပါ jeu ရေနေ မျှဝေပျော်မွေ့ရန်။
ရှားပါး, လီမိတက်, ဆေးညွှန်းဒီရယူရန်နေကြသည် စိတ်ကြိုက်လုပ်ဂိမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ထူးခြားသောရောစပ်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းရုံးမှအကြီးမြတ်ဆုံးဂရုစိုက်မှုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဤခမ်းနားထည်ဝါသောတည်ဆောက်ပုံသည်ပေါင်းစပ်မှုမျိုးစုံကိုနောက်ဆုံးပေါ်တတ်နိုင်သောထိပ်တန်းအဆင့်သို့ပေးစွမ်းသည်။ စိတ်သောကရောက်နေသည့်ကလေးငယ်များ၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်ဤသို့သောထူးကဲသောနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်လိုက်သည်။
- မင်းရဲ့တောင်းဆိုပါ စခန်းချနေထိုင်ရန်အတွက်စျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံဂိမ်း အလွန်ကြီးမားသောစိတ်ကူးယဉ်အတူ။
လေထုနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောမဟာမိတ်မိုးလုံလေလုံကစားကွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသဘောတူညီချက်ရှိတိုးတက်မှု၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်။ အပြင်အဆင်များ၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာပါမိုးလုံလေလုံကစားareaရိယာ သူတို့ဆွဲဆောင်မှုများမှာအဖြစ်ထိရောက်သော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်စရာဂိမ်းလိုပဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းဖွဲ့စည်းပုံ ကလေးငယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။
အသစ်လမ်းကြောင်း, ထူးခြားတဲ့နှင့် Snobbish နှစ် ဦး စလုံး, ဒီ တောရိုင်းမြစ် အားလပ်ချိန်နှင့်အနားယူမှုသို့ ဦး တည်စေသည်။ စွန့်စားသူများ၏လမ်းကြောင်းတွင် မြစ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကောင်းကင်ဘုံမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးနှင့်ဒဏ္legာရီကိုနှစ်သက်သူ၊ လှပသောအာကာသထဲတွင်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့နေသည် ပျင်းရိမြစ် ou နှေးမြစ်.
- လှပသော၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောမြစ်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေပါ။
ဒီအမွေဆက်ခံအမှတ်တံဆိပ် ကြီးမားသောရေကူးကန်ဝင်း စခန်းချဘို့မတူနိုင်တဲ့တိုးတက်မှု၏စစ်မှန်သောလက်မှတ်အမှတ်အသားများ။ ဒါအတွက် ရေကန်ကျယ်ကြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြာချိန်ကိုအာရုံစိုက်ကြပါစို့။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်သင်၏အမျိုးအနွယ်အားလွှဲပြောင်းပါလိမ့်မယ်! AquaSlide သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတွင်အမှတ်အသားပြုပြီးရေကူးကန်ပိတ်ထားသောအဆောက်အအုံ၏သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။
- nomenclature တောင်းပါ ရေကူးကန်ဝင်း ရက်ရောသောဒီဇိုင်းနှင့် AquaSlide ။
အလှအပနှင့် LXXURY အဆိုပါမီးမောင်းထိုးပြ ရေကူးကန်ပရိဘောဂ. ဖက်ရှင်သည်အိပ်မက်မက်သူအဖြစ်သာမကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ AquaSlide သည်လေထုနှင့်သုခချမ်းသာကိုဖန်တီးသူသည်သင့်ဖောက်သည်များ၏အရသာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ထားသောရေကန်ပရိဘောဂများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးကဲသောရေကူးကန်ပရိဘောဂများစုဆောင်းခြင်းသည်သာမန်ထက်ထူးကဲသောစိတ်ကူးများကိုတုံ့ပြန်သည်။
- ရေကူးကန်ပရိဘောဂ၊ စတိုင်နှင့်ကြော့ရှင်းသည့်အပိုင်းများကိုလှည့်ပါ။
သင်၏ထူးကဲကောင်းမွန်သောအိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Multi-brand group ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါစို့။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုရှေ့သို့ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ် ၃၀ လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားရနံ့ကိုရရှိသည်။
AquaSlide သည်ဥရောပတွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးရေကူးကန်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပထမဆုံးတီထွင်သည် ရေဆလိုက်ထုတ်လုပ်သူ, ရေကူးကန်ဆလိုက်, ရေပန်းခြံဆလိုက်နှင့်ရေဂိမ်း။
ယခု AquaSlide သည်ထင်ရှားသောရာထူးနေရာရရှိထားသည် ရေကူးကန်ဆလိုက်ထုတ်လုပ်သူပြင်သစ် နှင့်နိုင်ငံတကာက, propels ကစားပုံဖွဲ့စည်းပုံ၊ မိုးလုံလေလုံကစားကွင်းအပြင်ရိုင်းမြစ်၊ ရေကူးကန်နှင့်ရေကန်ပရိဘောဂများပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းရုံးသည်သင်၏စီမံချက်နှင့်အညီဖြေရှင်းချက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီးသင်၏လေ့လာမှုအဆင့်တိုင်း၌သင့်အားထောက်ပံ့ပေးပြီးသင်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုစစ်ဆေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစုံစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏အသိပညာသည်အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေဆလိုက် အလွန်အထူးပြုကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်။
ရေတံခွန် ကဏ္creditများ၊ ပြင်ပဟိုတယ်များနှင့်ရေဥယျာဉ်များတွင်အကြွေးများစွာကိုကိုးကားထားသောအစုရှယ်ယာများတွင်နေရာအနှံ့တွေ့နိုင်သည်။
14 chemin du BOLS - 34150 Puéchabonပြင်သစ်)
ဟိုတယ် toboggan ထုတ်လုပ်သူ
Kit အတွက် Toboggans
ကိရိယာအစုံအတွက်လှေကားနှင့် Gateway မှာ
ရေနေဂိမ်းအဆောက်အ ဦ များ
အဆောက်အ ဦ များကစားသည်
အဆောက်အ ဦး အပြင်ကစားဖွဲ့စည်းပုံ
ဟိုတယ် Lounge ကုလားထိုင်
©မူပိုင်ခွင့် 2019 - Aquaslide.fr - မူပိုင်ခွင့်ရထားပြီး - နှိပ်ရာ - TOS - CGV
AquaSlide သည်အပြင်ဘက်ဟိုတယ်များ၊ အားလပ်ရက်ကျေးရွာများနှင့်အပန်းဖြေစင်တာများအတွက်အွန်လိုင်းအရောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ အသိုင်းအဝိုင်း ... AquaSlide သည်စခန်းချနေရာများ၊ မြူနီစီပယ်ရေကူးကန်များအပြင်အားကစားကလပ်များ၊ ရေပန်းခြံများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
ငါတို့ရဲ့ရေပန်းဥယျာဉ်လိုပဲ ရေကူးကန်လျှော နှင့်ထုံးစံရေလျှော, ငါတို့နှင့်ဆက်စပ်မှုကိုရှာပါ ရေဂိမ်းများ, ကစားကွင်း နှင့်အဆောက်အ ဦ များကစား။
ကဏ္ wild ကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်တောရိုင်းမြစ်များနှင့်ရေကူးကန်ပရိဘောဂများ၏အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားစွာကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည် ရေဆလိုက်ထုတ်လုပ်သူ စခန်းချနေထိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်၏စီမံကိန်းသံအမတ်ဖြစ်သော AquaSlide နှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းရုံးသည်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှု / ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအာမခံသည် ရေစျေးနှုန်းများလျှော အရည်အသွေးကောင်း
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော Aquaslide အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေပါ၊ အွန်လိုင်းမှတစ် ဦး ချင်းသီးသန့်ကိုးကားချက်သို့မဟုတ်အမှာစာကိုတောင်းခံပါ။
ပြီးတော့ငါတို့အပိုင်းကိုရှာပါ ထုံးစံဆလိုက်ထုတ်လုပ်သူ ရေတံခွန်
ထို site သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ AquaSlide site ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန် (သို့)“ Agreement” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းချက်များအရ Cookies များအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ခွင့်ပြုသည်။ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ